အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
ကြေးစားအဖြစ် အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် စက်ရုံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, Taiwanကျနော်တို့ထူးခြားပြောင်မြောက်ထောက်ပံ့ အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီရှိကြ၏။ စိတ်ဝင်စားပါက, ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်သာလွန်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုမှကျနော်တို့ပြီးသားကမ္ဘာ့ဈေးကွက်၌ကြာမြင့်စွာတည်တံ့နာမည်ကောင်းခဲ့ကြတယ်။ ကျနော်တို့ကအရည်အသွေးရှိတဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခြင်း၏ရည်မှန်းချက်အပေါ်လုပ်ဆောင်နေစောင့်ရှောက်မည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အပေါ်စိတ်ဝင်စားလျှင်
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုသို့မဟုတ်ပြဿနာများလိုအပ်ပါတယ်ဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ မကြာမီ။
ပုံစံ - JT0442
ဤစိတ်ကူးသည်တရုတ်မှဖြစ်သည်.ဓါးကိုအစားထိုးရန်လွယ်ကူသည်.အလွန်အရည်အသွေးမြင့် HSS ကိုကွေးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးသွားများကိုအလွန်မြန်ဆန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်ရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်.၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ် flatseamer cutter တိုင်း၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/sewing-thread-cutter.html
အပ်ချုပ်များအတွက် Cutters Thread
Flatseamer ရှုးJ0442-1 ဒီဖြတ်စက် Yamato အပိုပစ္စည်းကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်–3021060.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓါးပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများကိုဂဟေဆော်ပါသည်.ဒီပစ္စည်းကိုဥရောပကလုပ်တယ်.နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီ cutter ထောင်ပေါင်းထောင်ချီကိုတရုတ်ပြည်သို့ရောင်းချသည်.ဤသည် flatseamer ရှုးဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
အကောင်းဆုံး အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် အပ်ချုပ်အပ်ချည်ဖြတ်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
Juki မော်ဒယ် Overlock ရှုးB1530-352-000 ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဓါးအတွက်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်သော HSS ကိုရွေးချယ်သည်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုပစ္စည်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့နှစ်စဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်.ဒီဖြတ်စက်တောင်မှအလွန်ဟောင်းနွမ်းသော Juki စက်အတွက်ဖြစ်သည်,ဖောက်သည်အချို့သည်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးကိုရှာဖွေသည်.